नेपाल आईडल : को हुन सज्जा चौलागाई ? - Sagarmatha Online News Portal
नेपाल आईडल : को हुन सज्जा चौलागाई ?
काठमाडौं । गायन रियालिटी शो नेपाल आईडल तेस्रो सिजनको उपाधि मोरङकी सज्जा चौलागाईले जितेकी छन् ।
मोरङ पथरीकी सज्जा नेपाल आइडलमा छनोट भएसँगै उनको रक पप र भर्सटायल गायकीको चर्चा हुन थालेको थियो । उनको प्रस्तुति र बोल्ड स्वरको हरेक कार्यक्रममा प्रशंसा हुने गर्छ । कक्षा ८ मा पढ्दा स्कुलमा भएको गायन प्रतियोगितामा उनले पहिलो स्थान प्राप्त गरिन् । बाबा मोरङमा र आमा साइप्रसमा भएकी सज्जा आफ्नो भाइसँगै हुर्किएकी हुन् ।
पहिलो पटक उनले फ्लेवर्स रेस्टुरेन्ट तारागाउँमा गाएकी थिइन् । गाएर कमाएको पहिलो कमाइ पाँच सय रपैयाँ थियो । उनका आमाबुवाले गाउन सधैं सहयोग गर्छन् । व्याचलर्सकी विद्यार्थी सज्जा नेपाल आइडल सिजन-३ को अडिसनले यता तानिएकी हुन् ।
नेपाल आइडलमा अरूले गाएको सुन्दा यत्तिको त म पनि गाउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । गायक सविन राईकी फ्यान सज्जा नेपाल आइडलले आफूलाई संगीतसँग अझ नजिक बनाएको बताउँछिन् ।
फस्ट रनरअप : को हुन प्रवीण बेडुवाल ?
बर्दिया राजापुरका प्रवीण नेपाल आइडल सिजन-३ का फस्ट रनरअप बने । शास्त्रीय संगीतका विद्यार्थी बेडुवाल जब नेपाल आइडलको स्टेजमा उत्रन्थे गायन अवधिभर गीतमै डुब्थे । हरेक इपिसोडमा अब्बल गाउने प्रवीण शान्त स्वभावका छन् ।
उनी भारतको तमिलनाडुमा हुर्किएका हुन् । इन्डियन आर्मीमा आबद्ध उनका बुवाले गायनका लागि उनलाई कहिल्यै सहयोग गरेनन् । उनका बुवाले प्रवीण पनि आर्मीमै जागिर खाउन भन्ने सोच्थे । बुवाले भनेपछि कसैले पनि नाइँ भन्न सक्दैनथे । प्रवीण गाउन नछाड्ने, उनका बुवाले गीत गाएको सुन्न नसक्ने । बुवाले एक दिन प्रवीण सामु एउटा प्रस्ताव राखे । ‘प्रवीण कि गाउन छाडिदे कि घर ? प्रवीणले घर नै छाडिदिए । त्यसपछि हजुरआमासँग बसे । उनका हजुरबुवा सानोमै भारत पसेका थिए । उतै व्यापार गरे । छोराछोरी उतै हुर्काए । तर पनि उनलाई भनिरहन्थे, ‘यो हाम्रो ठाउँ होइन है । नेपालमै फर्कनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ ।’ नेपालमै सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने सोच थियो । हजुरबुवा आफ्नै देशमा काम गर्न उक्साउँथे । यसैले पनि प्रवीणमा नेपालमै केही गनुपर्छ भन्ने भावना जागेको थियो ।
प्रयाग संगीत विश्वविद्यालय इलाहाबादबाट शास्त्रीय संगीतमा उनले व्याचलर्स गरेका छन् । संगीतलाई अगाडि बढाउने भन्दै उनी नेपाल पनि आएका थिए तर यहाँको वातावरण राम्रो लागेन उनलाई । उनी तमिलनाडु नै फर्किए । त्यहाँ गएपछि पनि उनी गीतसंगीतमै निरन्तर लागिरहे । उनलाई परिपक्व गायक बन्नु थियो ।
बुटवल अडिसन हुँदा उनी चितवनमा थिए । नेपाली गीतसंगीत सुनेर हुर्किएका प्रवीण नेपाली भाषाका गीत पनि उत्तिकै राम्रो गाउँथे । उनका नेपाली साथीले नेपाल आइडलमा जाने सल्लाह दिए । उनी पहिलो टेकमै नेपाल आईडलको अडिसनबाट छनोट भएका थिए ।
सेकेन्ड रनरअप : को हुन किरणकुमार भुजेल ?
महोत्तरी बर्दिबासका किरणकुमार भुजेल नेपाल आईडल तेस्रो सिजनमा सेकेन्ड रनरअप बने । उनी वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमार्फत नेपाल आइडलमा पुनः भित्रिएका हुन् । उनले सबै कार्यक्रममा दमदार प्रस्तुति दिएका छन् । उनी केही वर्षदेखि नेपाली संगीतमा संघर्ष गरिरहेका थिए । सामान्य किसान परिवारमा हुर्किएका किरणलाई संगीत सिक्ने रहरले संघर्ष र अभावको बाटोमा लामै हिँडाएको छ । नेपाल आइडल आउनुअघि नै उनले केही गीत सार्वजनिक गरिसकेका थिए । कुशल गायक बन्ने सपनाले उनलाई अभावको बाटो पार गर्न हौसला दियो ।
गाउँमा भैंसी चराउन जाँदा होस् या धान रोप्न खेत पस्दा होस् उनले दाजु सुमनसँगै गीत गाउने अभ्यास गर्थे । इन्डियन च्यानलमा आउने सांगीतिक रियालिटी सो हेरेर उनले नेपालमा पनि यस्तै स्टेज होस् भन्ने कल्पना गर्थे ।
नेपाल आइडललाई सुरुआतदेखि नै पछ्याएका भुजेल पहिलो सिजनमा थिएटर राउन्डसम्म पुगेर बाहिरिएका थिए । पिठ्यूँमा स्याउलाको भारी बोलको कर्णप्रिय गीत गाउँदै सिजन-३ को अडिसनमा छनोट भएका थिए ।